ILufthansa ivikela ukwedlula kwemali emakethe enkulu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJalimane » ILufthansa ivikela ukwedlula kwemali emakethe enkulu
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zaseJalimane • Izindaba • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ngokubekwa kwebhizinisi lokugcina ngoFebhuwari 2021, iLufthansa Group isivele ithole ukuxhaswa kabusha kwazo zonke izikweletu zezezimali okufanele zenziwe ngo-2021 futhi yaphinde yabuyisela imali mboleko ye-KfW yama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1 ngaphambi kwesikhathi.
Isibopho sesibili sebhizinisi se-1 billion euros esikhishwe ngo-2021.
Ukubekwa nokuvuthwa okubili kweminyaka emithathu nesishiyagalombili kugcwalisa iphrofayili yokuvuthwa kweLufthansa Group.
Izimali zesikhathi eside eziqoqiwe zizosetshenziselwa ukuqhubeka nokuqinisa ukuqothuka kweQembu Lufthansa.
Deutsche Lufthansa AG uphinde wakhipha ngempumelelo isibopho esinenani eliphelele lama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-1. Isibopho esinehlelo lama-euro angama-100,000 safakwa emigodini emibili enesikhathi seminyaka emithathu nesishiyagalombili ngokulandelana kanye nomthamo wama-euro ayizigidi ezingama-500 ngamunye: Isamba esinegama kuze kube ngu-2024 sithwala inzalo ngamaphesenti ayi-2.0 ngonyaka, isamba esivuthwa 2029 3.5 amaphesenti.
Ngokubekwa kwesibopho sokugcina senkampani ngoFebhuwari 2021, iQela selivele lazuza ukukhokhelwa kabusha kwazo zonke izikweletu zezezimali okufanele zikhokhwe ngo-2021 futhi lakhokha nemalimboleko ye-KfW yamarandi ayi-1 billion ngaphambi kwesikhathi. Izimali zesikhathi eside manje esezisetshenzisiwe zizosetshenziselwa ukuqhubeka nokuqinisa Iqembu LufthansaUkweqiwa kwemali.
“Ukubuyiswa okuphindiwe kwesivumelwano sokusebenzisana kuphinde kuqinisekise ukufinyelela kwethu kuzinsizakusebenza ezahlukahlukene ezinemali. Imigqa emibili engaphezu kweminyaka emithathu nesishiyagalombili ilingana ngokuphelele kuphrofayili yethu yokuvuthwa. Ngaphezu kwalokho, singathola ukuxhaswa ngemali emakethe yezimali ngamanani amahle uma kuqhathaniswa nezinyathelo zokuzinza. Siyaqhubeka nokusebenza ngendlela ehlelekile ezinyathelweni zethu zokwakha kabusha ukuze sikhokhe izindlela zikahulumeni zokuzinzisa ngokushesha okukhulu, ”kusho uRemco Steenbergen, Isikhulu Esiphezulu Kwezezimali seDeutsche Lufthansa AG.
Kusukela ngoMashi 31, leli qembu belinemali nemali elinganiselwa kuma-euro ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.6 (kufaka phakathi nezimali ezingafakwanga ezivela kumaphakeji okuzinza eJalimane, eSwitzerland, e-Austria naseBelgium). Ngaleso sikhathi, iLufthansa yayisebenzise cishe ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezi-2.5 zama-9 billion euros government package.
Ngaphandle kokukhishwa kwamabond namuhla, iLufthansa Group iyaqhubeka nokwenza amalungiselelo okunyusa imali. Imali etholakele izobamba iqhaza ikakhulukazi ekubuyiselweni kwezinyathelo zokuzinza zesiKhwama Sokuqinisa Umnotho waseJalimane (i-ESF) kanye nokubuyiselwa kwesakhiwo semali esimeme nesisebenza kahle sesikhathi eside. AmaBhodi Ezokuphatha kanye Nezokuphatha awakasithathi isinqumo ngosayizi nesikhathi sokunyuka kwemali okungenzeka kube khona. Ngaphezu kwalokho, kuzotholakala ukuvunyelwa yi-ESF ngalokhu.